လက်သန်းက ပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း - Real Gaming Myanmar
လက်သန်းက ပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း
By zc / 1 month ago / Astrology / No Comments
လူတစ်ယောက်ရဲ့ လက်သန်းကို ကြည့်ပြီး အဲ့ဒီသူဟာ ဘယ်လို လူစား လဲ ဆိုတာကို အကြမ်းဖျဉ်းသိနိုင်ပါတယ်။လက်သန်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ per sonality, ကို ဖော်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီယူဆချက်ကတော့ကိုရီးယား လူမျိုး တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုပါ။ကိုယ်လုံးဝ မသိတဲ့ မရင်းနှီးတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလူရဲ့ လက်သန်းအရှည်ကို ကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ type ကိုတော့အကြမ်းဖျဉ်း သိနိုင်တယ်လို့ koreaboo မှာဖော်ပြထား တာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
လက်သန်းက လက်သူကြွယ်ရဲ့ ပထမအဆစ်နဲ့ အရှည်တူမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလူ ကို “Type A.” လို့ အလွယ်သတ်မှတ်ပါမယ်။သူတို့ဟာဆိုရင် bright ဖြစ် တ ယ်၊ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ သူတွေပါ။တခုခုကို ဆိုရင် အရိပ်ပြ အကောင်မြင် တတ် သူတွေပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ မျှတတယ်၊ရင့်ကျက်တဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး ပိုင်ရှင်တွေပါ။သူတို့နဲ့ ရင်းနှီးတယ်၊အကြောင်းသိတဲ့ သူမျိုး တွေကို ဆိုရင် သူ့ရဲ့ရ င်ထဲက နွေးထွေးမှုကို ထုတ်ပြတတ်သူတွေပါ။ ဟာသဉာဏ်ရှိတယ်၊ရင်ထဲက အရှိကို အရှိအတိုင်း ထုတ်ပြတတ်တဲ့ ရိုးသားသူတွေပါ။တစ်ယောက် တည်း အထီးကျန်ရမှာကို သေမလောက် ကြောက်သူတွေပါ။တခုခုကို ဆိုရင် အရမ်းကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားတတ် တွေးတတ်လွန်းတာကိုတော့ နည်းနည်း လျှော့သင့်ပါတယ် … ။
လက်သူကြွယ်ရဲ့ ပထမအဆစ်ထက် ပိုရှည်တဲ့ လက်သန်းမျိုးပါ။လူမှုဆက်ဆံ ရေးကောင်းတယ်၊ဆိုရှယ်ကျတဲ့ သူတွေပါ။တခြားသူတွေ ထက်ပိုပြီး အလုပ်ကို ကြိုးစားတတ်သူတွေပါ။ကြင်နာတတ်တယ်၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေး ညက်တာေ တွကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများတတ်သူတွေပါ။Communication မှာ တ ကယ့်ကို ဆရာကြီးတွေပါ။ငြင်းခုံ စကားများရတာကို မကြိုက်ပဲ relationship တစ်ခုမှာ ဘယ်လိုမျိုး ဟန်ချက်ညီမျှအောင် လုပ်တဲ့ နေရာမှာတော်ပါတယ်။တခါ တလေမှာတော့ ပင်ကိုယ်အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်၊ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလား ပြီးသိမ်မွေ့တဲ့ သင့် အပြုမှုတွေကြောင့် တစ်ချို့သူတွေက အမြင် တိမ်းစောင်း တာမျိုး ခံရတတ်ပါတယ် …. ။
လက်သူကြွယ်ပထမအဆစ် ထက် ပိုတို တဲ့ လက်သန်းမျိုးပါ။လျှို့ဝှက် တတ်တဲ့ သူမျိုးဖြစ်ပေမယ့် ရိုးဖြောင့်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်ပါ။အရှက်လည်း ကြီးပါတယ်။ဒါပေ မယ့် လျှို့ဝှက်ချက်တွေ အရမ်းကို များလွန်းတော့ တစ်ဖက်လူက သင့်ရဲ့ စိတ်ကို ဖတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်။ရင်းနှီးလာရင်တော့ ခံစားချက်တွေကို ချပြတတ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူတွေအပေါ်မှာ အရမ်းမျှော်လင့် ထားတတ်သူတွေပါ။ဒါကြောင့် ကိုယ်က မျှော်လင့်တာတွေ အရမ်းများနေတော့ ဖြစ်မ လာတဲ့ အခါ တစ်ယောက်တည်း စိတ်ပျက် နာကျင်နေတတ်သူပါ။သူများ ကို ကူညီဖို့ ဝန်မလေးတတ်သူပါ။ဒီလိုလူမျိုး တွေ အတွက်ကတော့ relation ships တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကြီး မတွေးပါနဲ့။မေ မျှာ် လင့်ပါနဲ့ လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ကိုယ်ကကြီး ကူညီပေးလိုက်မယ်ဆိုတွေချည်း မလုပ်ပဲ သူပေးလာမယ့် အကူအညီတွေလည်း ယူပေးပါ။သူများတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ် … ။
Credit to AuntMay
လကျသနျးက ပွောတဲ့ သငျ့အကွောငျး
လူတဈယောကျရဲ့ လကျသနျးကို ကွညျ့ပွီး အဲ့ဒီသူဟာ ဘယျလို လူစား လဲ ဆိုတာကို အကွမျးဖဉျြးသိနိုငျပါတယျ။လကျသနျးက လူတဈယောကျရဲ့ per sonality, ကို ဖျောပွပေးနိုငျတယျဆိုတဲ့ ဒီယူဆခကျြကတော့ကိုရီးယား လူမြိုး တှရေဲ့ ယုံကွညျမှုပါ။ကိုယျလုံးဝ မသိတဲ့ မရငျးနှီးတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ ဆကျသှယျပွောဆိုတော့မယျဆိုရငျ အဲ့ဒီလူရဲ့ လကျသနျးအရှညျကို ကွညျ့ပွီး သူ့ရဲ့ type ကိုတော့အကွမျးဖဉျြး သိနိုငျတယျလို့ koreaboo မှာဖျောပွထား တာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
လကျသနျးက လကျသူကွှယျရဲ့ ပထမအဆဈနဲ့ အရှညျတူမယျဆိုရငျတော့ ဒီလူ ကို “Type A.” လို့ အလှယျသတျမှတျပါမယျ။သူတို့ဟာဆိုရငျ bright ဖွဈ တ ယျ၊ဉာဏျကောငျးတဲ့ သူတှပေါ။တခုခုကို ဆိုရငျ အရိပျပွ အကောငျမွငျ တတျ သူတှပေါ။နောကျတဈခုကတော့ မြှတတယျ၊ရငျ့ကကျြတဲ့ ကိုယျရညျ ကိုယျသှေး ပိုငျရှငျတှပေါ။သူတို့နဲ့ ရငျးနှီးတယျ၊အကွောငျးသိတဲ့ သူမြိုး တှကေို ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ရ ငျထဲက နှေးထှေးမှုကို ထုတျပွတတျသူတှပေါ။ ဟာသဉာဏျရှိတယျ၊ရငျထဲက အရှိကို အရှိအတိုငျး ထုတျပွတတျတဲ့ ရိုးသားသူတှပေါ။တဈယောကျ တညျး အထီးကနျြရမှာကို သမေလောကျ ကွောကျသူတှပေါ။တခုခုကို ဆိုရငျ အရမျးကို နကျနကျရှိုငျးရှိုငျးခံစားတတျ တှေးတတျလှနျးတာကိုတော့ နညျးနညျး လြှော့သငျ့ပါတယျ … ။
လကျသူကွှယျရဲ့ ပထမအဆဈထကျ ပိုရှညျတဲ့ လကျသနျးမြိုးပါ။လူမှုဆကျဆံ ရေးကောငျးတယျ၊ဆိုရှယျကတြဲ့ သူတှပေါ။တခွားသူတှေ ထကျပိုပွီး အလုပျကို ကွိုးစားတတျသူတှပေါ။ကွငျနာတတျတယျ၊ပေါငျးသငျးဆကျဆံ ရေး ညကျတာေ တှကွောငျ့ လူခဈြလူခငျပေါမြားတတျသူတှပေါ။Communication မှာ တ ကယျ့ကို ဆရာကွီးတှပေါ။ငွငျးခုံ စကားမြားရတာကို မကွိုကျပဲ relationship တဈခုမှာ ဘယျလိုမြိုး ဟနျခကျြညီမြှအောငျ လုပျတဲ့ နရောမှာတျောပါတယျ။တခါ တလမှောတော့ ပငျကိုယျအေးအေးဆေးဆေး နတေတျ၊ငွိမျးခမျြးရေးကို လိုလား ပွီးသိမျမှတေဲ့ သငျ့ အပွုမှုတှကွေောငျ့ တဈခြို့သူတှကေ အမွငျ တိမျးစောငျး တာမြိုး ခံရတတျပါတယျ …. ။
လကျသူကွှယျပထမအဆဈ ထကျ ပိုတို တဲ့ လကျသနျးမြိုးပါ။လြှို့ဝှကျ တတျတဲ့ သူမြိုးဖွဈပမေယျ့ ရိုးဖွောငျ့တဲ့ စိတျဓါတျပိုငျရှငျပါ။အရှကျလညျး ကွီးပါတယျ။ဒါပေ မယျ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှေ အရမျးကို မြားလှနျးတော့ တဈဖကျလူက သငျ့ရဲ့ စိတျကို ဖတျနိုငျဖို့ဆိုတာ အရမျးကို ခကျခဲပါတယျ။ရငျးနှီးလာရငျတော့ ခံစားခကျြတှကေို ခပြွတတျပါတယျ။ကိုယျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ သူတှအေပျေါမှာ အရမျးမြှျောလငျ့ ထားတတျသူတှပေါ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျက မြှျောလငျ့တာတှေ အရမျးမြားနတေော့ ဖွဈမ လာတဲ့ အခါ တဈယောကျတညျး စိတျပကျြ နာကငျြနတေတျသူပါ။သူမြား ကို ကူညီဖို့ ဝနျမလေးတတျသူပါ။ဒီလိုလူမြိုး တှေ အတှကျကတော့ relation ships တဈခုတညျဆောကျမယျဆိုရငျ အရမျးကွီး မတှေးပါနဲ့။မေ မြျှာ လငျ့ပါနဲ့ လို့ အကွံပွုခငျြပါတယျ။ကိုယျကကွီး ကူညီပေးလိုကျမယျဆိုတှခေညျြး မလုပျပဲ သူပေးလာမယျ့ အကူအညီတှလေညျး ယူပေးပါ။သူမြားတှနေဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နနေိုငျအောငျ ကွိုးစားရပါမယျ … ။
Previous: မွန်ပြည်နယ် ရေကြီးပြီး ကြောက်စရာကောင်းအောင် ရေစီးလည်းသန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
Next: သမီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင် အကူအညီတောင်းထားတာမို့ အမြန်ဆုံး အိမ်ပြန်လာစေရန် ဝိုင်းကူ ကူညီပေးကြပါ